Home Wararka Axmed Dheerow Gedo Badbaadi intaad RW Xamza la Dagaali lahayd.
Axmed Dheerow Gedo Badbaadi intaad RW Xamza la Dagaali lahayd.
Wararka laga helayo ilo la isku halleyn kara ayaa sheegaya in ninka la yiraahdo Axmed Dheere oo asalkiisa ku hayb ah MW hore hore Maxamed Cabdullahi Farmajo, isla marakaana ahaa ruuxa ku bixiya lacago badan oo lagu fasahaadiyey dalka ayaa hadda waxaa uu Xamar u soo diray lacago dhowr ah oo lagu sii billaabayo in looga hortago ansixinta barlamanka ee RW cusub.
Runtii waa nasiibxumo in gobolka ay ka soo jeedaan dadkiisa ay jiraan dhibaatooyin bani aadamino iyo gaajo xun oo salka ku haysa dadka gobolka oo aan heshiis ahayn inuu ku bixiyo lacag intaa la’eg burburinta dowladnimadii wax loogu qaban lahaa dhibaatooyinkaas, kadib markii la magacaabay RW ka soo jeeda Jubaland, mudane Xamza Cabdi Barre.
RW Xamza iyo Axmed Dheere waa isku hayb marka dhanka Somalida la eego waxaanu kursiga kula fahiyaa 4.5 oo Axmed Dheere iyo Farmajo ayuu ku matalaa, waxayna ahayd inuu ku farxo Axmed Dheere in shakhsi reer Jubbaland ah taariikhda markii ugu horreysay loo magacaabay RW dalka, ciddii u magacowdayna looga abaal hayo oo lagu kaalmeeyo inuu guuleysto RW.
MW Xasan Sheekh markii uu magacaabayey nin reer Jubaland ah sida laga soo xigtay waxay ujeedadiisau ahayd in jubaland ay la saan qaaddo Qaranka intiisa kale marka loo magacaabo Ruux ay tabashadooda la wadaagi karaan waxna ka qaban kara kala taagnaanta beelaha wada dega.
Axmed Dhere iyo Farmajo waxaa la og yahay dhibaatada ay ka abuureen gobolkaas oo muhimd weyn qarannimada Somaliya u leh oo ay u celiyeen inay hadda ka shaqeysato koox leh waa inaan annaga xukunnaa haddii kale lama xukumayo mana la horumarinayo.
Waxaana la sheegayaa inay haddaba qarkood jiraan gudaha Itoobiya oo la soo sheegayoo in loo soo soofeynayo inay sii kordhiyaan dhibaatooyinka iyo gacan ka hadalka si nabadeynta laga cabsi qabo inay bilaabaan MW Xasan Sheekh iyo RW Xamza loo carqaladeyn lahaa.
Fekerka noocan ah waa ka gudbeen beelaha Somalida badankood oo maanta magaalo walba iyo tuulo walba waxaa ka shidan nal marka laga reebo meelaha ay haysataan shabaabka oo iyaga xataa la leeyahay waxaa ka jirta kala dambeyn cabsiba ha ku timaadee.
Axmed Dheere waxaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo in reerkiisa oo qeybsan inuu mideeyo oo uu dhaqaalaha gobolkiisa geliyo si walaalahaas ay qaranka oo ka tagi doona u la tartamaan.
MW Xasan Sheekh Maxamuud, RW Xamza Barre iyo MW Axmed Madoobe waxaa laga rabaa inay dadaal dheer ku bixiyaan sidii jubaland loo mideyn lahaa iyagoo muujinaya tanasulka ugu weyn ee lagu kasban karo in degaanada Jubbaland la mideeyo oo ay wax a qeybsadaan walaalahood sida K/Galbeed, H/Shabeelle/ G/mudug/Puntland iyo Somaliland.
Haddaba waa in golaha shacbiga ay ka koraan aragti fogna ka yeeshaa tallaabooyinka lagu carqalladeynayo dalka cid kasta ha qaaddee, kuna sirmin beerlaxawsi aan faa’iido fog u lahayn degaanno gaar ah inay dadkooda ka reebaan mooyee. Xildhibaanka waa mudanaha ugu sarreeya qaranka waana masuulka ugu mudan inu ilaaliyo wanaagga iyo horumarka dalka guud ahaan, gaar ahaan degaanka uu ka soo jeedo ee uu golaha ku matelo.
Previous articleEuropean fishing fleets accused of illegally netting tuna in Indian Ocean
Next articleMW Xasan oo Booqasho rasmi ah ugu ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta
Qaraxii labaad oo ka dhacay Buula Xuubeey
Waare oo isbadal ku sameeyay Galaha Wasiirada Hirshabelle